Shirkado Mashiinka Mashiinka Jecel ee Bacriminta Silsilad Gaaban oo Jaban | YiZheng
Ku Silsilad Firfircoonida Bacriminta waa mid ka mid ah qalabka ugu caansan ee warshadaha bacriminta isku dhafan. Mashiinku wuxuu qaataa awoodda sare iyo silsiladda carbide-ka-caabbinta leh xawaare isku mid ah oo isku mid ah, kaas oo ku habboon burburinta alaabta ceeriin iyo alaab soo celinta.
Waa maxay Mashiinka Xashiishka Bacriminta Xinjiraha Gawaarida ah?
Ku Silsilad Firfircoonida Bacriminta waa midka ugu badan ee loo isticmaalo qalabka wax lagu burburiyo warshadaha bacriminta xarunta. Waxay leedahay waafajin adag oo loogu talagalay maadada leh biyo badan waxayna si habsami leh u quudin kartaa iyada oo aan la xannibin. Waxyaabaha ayaa ka soo galaya dekedda quudinta waxayna ku dhacayaan silsiladda wareegga xawaaraha sare ee guryaha. Ka dib markay isku dhacaan, maaddada waa la tuujiyaa oo la jajabiyaa, ka dibna waxay ku dhacaan madaxa dubitaanka ka dib garaacida derbiga hoose ee guriga. Sidan oo kale, waxay noqoneysaa budo ama walxo ka hooseeya 3mm ayaa la siidayaa kadib dhowr shilal.
Qaab-dhismeedka Mashiinka Burburka Mashiinka Bacriminta silsilad taagan
In geeddi-socodka burburin, ka Silsilad Firfircoonida Bacriminta isticmaal xawaare isku mid ah oo ka sameysan silsilad silsilad carbide u adkeysata oo xoog badan, iyo naqshad macquul ah oo loogu talagalay in laga soo galo ama laga baxo, sidaa darteed waxyaabaha la dhammeeyay waa qaab isku mid ah oo mashiinka ha ku dhejin. Noocan jajabku wuxuu qaatay teknolojiyaddii ugu dambaysay iyo bir tayo sare leh, naqshadaynta nidaamka hagaajinta, sidaa darteed waa wax soo saar ballaaran iyo kalsooni sare.
Codsiga Mashiinka Xashiishka Bacriminta Xarago
Taxanaha LP Silsilad Firfircoonida Bacriminta waxay ku habboon tahay burburinta maaddada ballaadhan ee khadka wax soo saarka bacriminta, laakiin sidoo kale si ballaadhan loogu adeegsado warshadaha kiimikada, qalabka dhismaha, macdanta iyo warshadaha kale.
Faa'iidooyinka Mashiinka Xashiishadda Bacriminta Xaragada ah
•Silsilad Firfircoonida Bacriminta waa midka godka qafis ee qotada dheer cabirkiisu yahay.
•Silsilad Firfircoonida Bacriminta waxay leeyihiin qaab dhismeed fudud, iyo daarad yar, iyo Dayactir fudud.
•Silsilad Firfircoonida Bacriminta Mashiinka wuxuu leeyahay saameyn wanaagsan, hawlgal siman, nadiif nadiif ah.
•Waa cadowga maaddooyinka adag ee badan.
Mashiinka Mashiinka Bacriminta Qalabka Mashiinka Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka ah
Xulka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xuddunta
Tirada Quudinta Ugu Badan (mm)
Cabbirka walxaha burburay (mm)
Awoodda Awoodda (KW)
Awood wax soo saar (t / h)
Hore: Maaddada Bacriminta ee Semi-qoyan Semi-qoyan Adoo Isticmaalaya Burbur
Xiga: Mashiinka Burburiya Labada Marxaladood